Poll - magazine "Potato System"
AFAKA ATAO ATAO NY OVY!
Ho an'ny sain'ireo mpikambana mpikambana ao amin'ny Vondron'ahitra!
Tena LOHATENY vaovao resadresaka
Valin'ny fanadihadiana momba ny fividianana zezika mineraly amin'ny fifanakalozam-bola
Картофельный Союз провел опрос среди читателей телеграм-канала «Дайджест журнала «Картофельная система», посвященный теме закупки минеральных удобрений на бирже. Предлагаем вам...
Fetin'ny fanavaozana "Teknolojia ovy"
Manasa anao izahay hanatrika ny hetsika ho an'ny mpamboly ovy matihanina Innovation Day "Potato Technologies" amin'ny 9 Jolay amin'ny 10:00 hatramin'ny 17:00 Toerana: ...
Ry mpamaky malala! Mampahatsiahy anao izahay fa ny orinasa mpamboly miompana amin'ny fambolena ovy dia afaka mandray maimaimpoana ny gazetinay. Raha te hisoratra anarana dia mila mameno fohy ...
Ny webinarina fahefatra an'ny Vondron'ny Ovy "SADY MIANATRA - MORA TANINDRAZANA"
Ry mpiara-miasa malala! Manasa anao izahay handray anjara amin'ny webinarina fahefatra an'ny Vondron'ny Ovy "MAHASOA MIANATRA - MORA AMIN'NY FAROTRA", izay hatao ...
Ny fiovana amin'ny fandaharam-potoana famoahana ny tranokala «Potato System»
Niditra dingana mavitrika ny asa lohataona any Russia, ary ny birao famoahana ny gazety Potato System dia nahazo fangatahana matetika kokoa hanemorana ny ...
Hivoaka amin'ny 2 Jona 2021 ny nomerao amin'ny magazine (Potato System # 2, 2021). Ity olana ity dia haparitaka amin'ny hetsika indostrialy lehibe indrindra ...
Safidy ovy voa HZPC an-tsompitra
Vokatry ny fandaminana dia nipoitra ny volavola fanampiny an'ny karazany Kolomba. Misy ihany koa karazana varimbazaha azo ampiasaina: Red Scarlett, Gioconda, Labadia Red Scarlett ...
Manasa ny rehetra handray anjara amin'ny webinarina fahatelo an'ny Vondrona ovy avy amin'ilay andian-dahatsoratra "MAHASOA FAMPIANARANA - MORA AO AMIN'NY FIELDY". It ...
Webinar: Teknolojia famokarana betirata
Tamin'ny 22 aprily, ny magazine "Potato System" dia mitazona webinar momba ny lohahevitra "Teknolojia amin'ny famokarana bitro latabatra." Mpikabary: 1. Dmitry Kuchmin, manam-pahaizana momba ny fisakafoanana ...
Jereo ny tombony azo avy amin'ny sehatry ny herinaratra mibontsina amin'ny fanodinana ovy
Manatsara ny kalitaon'ny vokatra, mampihena ny vidin'ny famokarana, mampitombo ny vokatra farany anao, manatsara ny lokony ary mahazo tombony amin'ireo karazana vokatra vaovao ....
P. 1 amin'ny 4 1 2 ... 4 Next.
Tany amin'ny faritr'i Astrakhan, dia nanomboka nanao ovy tany am-boalohany
Fomba vaovao amin'ny fikarakarana rano ho an'ny fanamboarana fonosana